चीन हाइड्रोलिक सेयरिंग मेशिन 6mm 2500mm काटने धातु प्लेट शियरिंग युरोप प्रकार - ACCURL निर्माता र आपूर्तिकर्ता अकुरल
हाइड्रोलिक सेयरिंग मेशिन 6mm 2500mm काटने धातु प्लेट शियरिंग युरोप प्रकार - ACCURL
ACCURL® गिलोटिन शियर एक प्रोजेक्टको फल हो जसको परिणामस्वरूप हामी एक साथ 'मेड इन चाइना' रचनात्मकता, डिजाईन र नवीनता सबै उत्कृष्ट विश्वसनीय चिनियाँ र यूरोपीयन घटक दायराको विश्वसनीयताका साथ ल्याउँदछौं। नतीजा अवान्त-गार्डेको एक उत्तम मिश्रण हो। दक्ष टेक्नोलोजी, अत्यन्त ठोस मेशिनको ग्यारेन्टी, यसको कटौतीको साथ सटीक र अत्यन्त उच्च गुणवत्ताको।
ACCURL® गिलोटिन शियर मानक उपकरणको फराकिलो श्रृंखलासँग उपलब्ध छ तर यो कुनै पनि समयमा सम्भव छ, आवश्यकता अनुसार वैकल्पिक उपकरणहरू थप्न।
हाइड्रोलिक सेयरिंग मेशीन सुविधाहरू समावेश:
१ ठोस मोनोलिथिक संरचना
२ एक avant-garde हाइड्रोलिक प्रणाली
Bla. ब्लेड क्यारियर बीम: ब्लेड बोक्ने बीमको साथ काट्ने अक्षमा जोर सिलिन्डर
Bla. ब्लेड प्रेशर सिलिन्डर, स्वत: रेगुलेटिंग दबावको साथ, काटने बलमा आधारित
Bla. ब्लेड बोकेको बोरा पूरै काट्ने लम्बाई माथि गाईम गाईड
Ball. रीयरक्युलेटिंग बल स्क्रूको साथ पछाडिको नियामक
Run. चलिरहेको पाels्ग्राहरूको टेबल र अगाडि समर्थन
Tw. जुम्ल्या-किनारा ब्लेडहरू
LED। एलईडी रोशनीको साथ रेखा काट्ने
१०. एस्टुन E21s संख्यात्मक नियन्त्रण
११. फ्रान्टल समर्थन फ्रेम रेट्रेटेबल समायोज्य गाइडहरू, मिलिमिटर नियम र चलिरहेको पाels्ग्राहरूको साथ पूरा भयो
१२. HIWIN बल स्क्रू र 0,05 मिमी शुद्धता संग पोलिश रड।
मजबूत मोनोलिथिक संरचना ठूलो स्थिरता र कटौतीको सटीकको ग्यारेन्टी हो। यहाँ सम्म कि डिजाइन अधिकतम कार्यक्षमता र दक्षताको मापदण्ड अनुसार सिद्ध छ, जस्तै न्यूनतम गर्न मर्मत र अपरेटर हस्तक्षेप कम गर्न।
हाइड्रोलिक गिलोटिन कपाल कपाल
यो वर्कशप मेशिन उच्च ग्रेड इस्पातको बनेको छ, कम्बल निर्माणको साथसाथै कुशल प्रदर्शन प्रदान गर्दछ। यो मेशिन उपकरणहरू मध्ये एक हो जुन फ्रेमवर्क संरचनाको साथ सबै स्टिल वेल्डिंगको लागि डिजाइन गरिएको हो। यसको प्रतिस्थापन एक मोबाइल workbench, स्ट्रोक डिजिटल प्रदर्शन र एक इलेक्ट्रोनिक सुरक्षा उपकरण संग हाइड्रोलिक गिलोटिन शियरिंग मेशीनरी सुसज्जित छ। प्रसोधन आवश्यकताहरूको प्रकृतिमा निर्भर गर्दै, कामको दबाव निश्चित दायरा भित्र समायोजित गर्न सकिन्छ। हाइड्रोलिक गिलोटिन प्रकारको प्लेट कपालको केन्द्रीकृत बटन नियन्त्रण छ त्यसैले सञ्चालन गर्न सजिलो छ। यो वर्कशप मेशिन सटीक पाना र प्लेट काम गर्दै उद्योगहरूमा लागू हुन्छ।
हाइड्रोलिक गिलोटिन शियर मेसिनरीले ग्राहकहरूलाई निम्न लाभहरू प्रदान गर्दछ:
१. यसको स्टिल वेल्ड फ्रेम संरचनामा राम्रो स्थिरता र कठोरता छ
२. शिट विकृति समायोज्य कपालका कोणको प्रयोगको कारण अत्यधिक कम भयो
। एक उच्च एकीकृत हाइड्रोलिक प्रणाली छ त्यसैले भरपर्दो र टिकाऊ छ
Re. आयताकार ब्लेडहरूले चार काट्ने किनारहरू सम्म लामो समायोजन गर्न सक्दछ त्यसैले लामो सेवा जीवन
Accurate. ब्लेडहरू बीचको दूरीको सहि, छिटो र सुविधाजनक समायोजनको लागि ह्यान्डल व्हील प्रयोग गर्दछ
अघिल्लो: ACCURL CNC बुर्ज पंचि Machine मेशीन MAX-T-50 टन शीट मेटल CNC पंच प्रेस निर्माताहरूका लागि।
अर्को: ACCURL 6Axis इलेक्ट्रिक सर्वो CNC प्रेस ब्रेक 40Ton 2000mm
हाइड्रोलिक सेयरिंग मेशीन २mm०० मिमी
हाइड्रोलिक सेयरिंग मेशिन mm मिमी
धातु काटनेको लागि हाइड्रोलिक शियरिंग मेशीन